Shina mpanamboatra milina shinoa | Fitaovana masinina Meixin
Manompo anao izahay
Matoky anay ianao, ny famokarana milina Brush matihanina Meixin.
Ny tanjonay dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika amin'ny avo lenta sy kalitao azo antoka mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa tsirairay mahazo aina sy matoky ny entana amin'ny entana avy any amin'ny application.Ony vokatra azontsika dia betsaka ny fangatahan'izy ireo avy eny an-tsena noho ny fananana tsara. Manana endri-javatra maro izy ireo izay manome antoka ny fampivoriana sy ny fampiharana azy.
Fototra brothes Miaraka amin'ny loha tokana iray, tsy miankina 2 axis, dia nampiasaina amin'ny milina fisaka fisaka fotsiny izy io.
kalitao tsara indrindra 5 axis 3 loha 2 milina 2 sy milina fanenon'ny 1tufting ho an'ny borosy fidiovana.
Serivisy fanamboarana manokana ho an'ny orinasam-barotra tokana na mitaky fitakiana.
Izahay dia arakaraka ny santionany ho an'ny mpanjifa momba ny famolavolana ny milina. Izahay dia hanao habe ny efitrano samy hafa. Ny halavam-patatra mahazatra: 400 * 60mm. Raha tianao ny hanao habe lehibe kokoa na baoritra manokana, dia maniry ny hataonay.
Indrindra, ho an'ny borosy roller
& milina fanasan-doka, ity karazana borosy ity dia mazàna ampiasaina amin'ny indostria ho an'ny milina fahasamihafana amin'ny fahasamihafana. Izany no iray amin'ireo antony ilana fanaony.
1. Fanontaniana: Ny mpanjifa dia milaza ny fepetra takiana sy fanarahana.
2. Famolavolana: Ny ekipa mpamolavola dia tafiditra amin'ny fanombohan'ny tetikasa iray mba hiantohana ny vokatra tsara indrindra natao indrindra hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
3. Fitantanana kalitao: Mba hanomezana vokatra avo lenta dia mitazona mahomby isika& Rafitra fitantanana mahomby.
4. Famokarana faobe: rehefa vita ny fankatoavana ny prototypes amin'ny famolavolana endrika, endrika sy fangatahana, ny famokarana no dingana manaraka.
5. Azontsika atao ny mandamina ny fitaterana baiko - na amin'ny alàlan'ny serivisintsika manokana, mpamatsy hafa na fitambaran'izy roa.
Feno tanteraka ao amin'ny tontolon'ny vokatra mpanjifa izahay. Saingy tsy milentika fotsiny isika amin'ny endri-javatra manokana amin'ny sehatra; dinihintsika ihany koa ny fanontaniana toy ny: "Inona no mampientanentana ny mpanjifanay?" "Ahoana no ahafahantsika manetsika ny filan'ny mpanjifa farany?" Izao no hataonay aminao. Io no fomba amadihanay ny tetikasanay ho tetikasanay.
Nahazo mari-pahaizana maro izahay ho an'ny vokatra momba ny kalitao
Nandritra ireo taona vitsivitsy lasa izay, ny laharam-pahamehana laharana 1 dia ny serivisy mpanjifa sy fahafaham-po ho an'ny mpanjifa hatrany. Nanao zavatra betsaka izahay mba hampiakarana ny kalitao ary miezaka mafy hanangana rafitra fitantanana kalitao sy antoka. Ankoatr'izay, ny orinasantsika dia nahatratra ny vokatra avy amin'ny fanamarinana tampoka ary ny fanamarinana CE.